बाबुरामको वरीयता मिलाउन जसपालाई सकस – Palika Times
बाबुरामको वरीयता मिलाउन जसपालाई सकस
पालिका टाईम्स २३ साउन २०७७, शुक्रबार प्रकाशित
२३ साउन, काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भटराईको वरीयतालाई लिएर जसपा नेपालभित्र मत बाझिएकाे छ । पूर्वसमाजवादी खेमाका नेताले डा.भटराईको वरीयता मिलाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, पूर्वराजपा खेमाका नेताले भने केन्द्रीय कार्यकारणी समितिमा उल्लेख भइसकेपछि अब त्यस विषयमा थप केही गर्नु नपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
बुधबारदेखि जपसाको पहिलो केन्द्रिय कार्यकारणी समितिको बैठक सुरु भएको छ । बैठकका सातवटा एजेन्डामध्ये एउटा एजेन्डा कार्यविभाजन पनि हाे । तर, यो एजेन्डालाई लिएर पनि पार्टीभित्र दुई थरी मत देखिएको छ । ६ दिनसम्म चल्ने भनिएको बैठकको कार्यतालिका तीनदिनलाई छोट्याएपछि शुक्रबार जपसा बैठकले निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर, नेताहरु बैठककाे एजेन्डाबारेनै अन्योलमा छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि केन्द्रीय कार्यकारणी समिति बुझाउँदा डा. भटराई वरिष्ठ नेताको रुपमा चौंथो वरीयतामा राखिएको थियो । त्यतिबेला पूर्वसमाजवादी पक्षका नेताहरुले डा. भटराईको वरीयतापछि मिलाउने बताएका थिए ।
आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय कार्यकारणी समितिमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्षद्वयसहित अशोक राई, डा. भट्टराई र राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेताको रुपमा रहने गरि ५१ सदस्यीय कार्यसमिति पठाइएको थियो ।
वरियताको पहिलो नम्बरमा ठाकुर रहेपछि डा. भटराई आफैँले आफ्नो नाम चाैंथो वरीयतामा राखेर जसपा दर्ता भएकाे थियाे । त्यतिबेलै याे विषयले चर्चा पाएको थियो ।
ठाकुर निकट नेता वृषेशचन्द्र लाल कार्यकारणी समितिमा उल्लेख भएअनुसार नै डा. भटराईको वरीयता मिलिसकेको र अब त्यसबारेमा पार्टीभित्र कुनै एजेन्डा नभएको बताउन्छन् । ‘उहाँ संघीय परिषद् अध्यक्ष पनि हुनु हुन्छ’ उनले भने, ‘तर वरियताका बारेमा अब खासै समस्या छैन ।’
तर, पूर्वसमाजवादी पक्षका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने दुईजना अध्यक्ष बाहेकका नेताको वरीयता र पद विभाजन बाँकी रहेको बताउँछन् । श्रेष्ठले यसबारेमा पार्टीमा पछि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने दाबी गरे । यद्यपी अहिलेकै बैठकमा त्यसबारे छलफल नहुने श्रेष्ठकाे भनाइ छ । ‘अहिले कार्यविभाजनमात्रै एजेन्डा हो’, श्रेष्ठले भने, ‘पदविभाजन र वरीयता अहिलेको एजेन्डा होइन ।’
जसपाका कतिपय नेताका अनुसार पार्टी एकिकरण गरेर दर्तामा जाँदा वरीयतामा डा. भट्टराई पहिलो नम्बरमा , ठाकुर र यादव दोस्रो तथा तेस्रो नम्बरमा राखिएकाे थियाे । तर, ठाकुरले नमानेपछि नेताहरुले डा. भट्टराईको नाम दोस्रो वरीयतामा राखेका थिए । तर, आयोग जाने बेलाको लिखित हेर्दा डा. भट्टराई आफैँले आफनो नाम दुई नम्बरबाट काटेर चार नम्बरमा पुर्‍याएका थिए।
एकथरीले भने भट्टराईले आफ्नो वरीयता घटाउनुलाई असन्तुष्टिको रुपमा लिएका छन् । ठाकुर निकट नेताहरुले अब कार्यकारणी समितिकै नामावली अनुसार पार्टी अघि बढ्ने तर्क गरेका छन् ।
शिर्ष नेताहरुले यस विषयमा मुख खालेका छैनन् । पार्टीको पहिलो बैठकले समायोजनसम्बन्धि निर्देशिका पारित गर्न लाग्दा अब मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै जाने कतिपय नेताहरुको आकलन छ ।
ठाकुर निकट नेता वृषेशचन्द लालले भने केही नेताहरुले अनावश्यक मुद्दालाई उचालेर पार्टीभित्र समस्या देखाउन खोजेको आरोप लगाए । बुधबारदेखि सुरु भएको बैठक आज एजेन्डामा प्रवेश गर्दै छ । आजको नया पत्रिकामा खबर छ।
कोरोना संक्रमणबाट २१ वर्षीय युवकको मृत्यु